"Andro fanomezana ho an'i Ekoatora" manokana hanampiana ireo tratry ny COVID-19
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Ekoatera » "Andro fanomezana ho an'i Ekoatora" manokana hanampiana ireo tratry ny COVID-19
Ny alakamisy 15 jolay 2020, ireo fikambanana tsy miankina Por Todos sy SOS Ecuador dia hiara-hiasa handefa ny “Andro fanomezana ho an'i Ekoatera” ofisialy hanampiana ireo izay tratry ny fahasahiranana ara-toekarena mifandraika amin'ny Covid-19. Miaraka amin'ny trangana virus coronavirus avo indrindra any Amerika Latina, lasa ny 55,000 ary voafetra ny loharanom-pahalalana mampihena ny firenena, ilaina ny fanentanana sy famatsiam-bola ho an'ireo tena mila izany. Miaina fahasahiranana ara-toekarena sy maha-olona betsaka i Ekoatora nefa tsy misy fiafarany.
“Misy vokany roa ny fandraisana anjara amin'ity fanentanana ity; amin'ny lafiny iray dia manohana an'i Ekoatera amin'ny fotoana hiatrehany ny toe-karena sarotra indrindra amin'ny tantarany. Etsy ankilany, mitondra fanantenana ho an'ny fianakaviana Ekoatoriana an'arivony izany ”, hoy ny Ambasadaoron'i Ekoatora ho an'ny US Ivonne Baki. “Faly aho fa manohana ny 15 Jolay ho toy ny 'Andro Fanomezana' natokana ho an'i Ekoatora.”
Amin'ny 15 Jolay dia mora ny manome na dia ny fandraisana anjara kely indrindra izay hanisy fiovana lehibe indrindra aza. Miantso ny fanampianao i Ecuador amin'ny fanampiany mba hampitsaharana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus any amin'ny firenena miroborobo any amin'ny Nosy Galápagos mahatalanjona sy ala mikitroka mahatalanjona.
Ny mpanorina an'i Por Todos Roque Sevilla dia nilaza fa: "Ity ady ataontsika ity dia misy fiantraikany amintsika rehetra. Tsy tokony hisoroka ny masontsika isika, fa hijoro eo anilany rehefa mifoha ny zava-misy vaovao fa tsy hiala io areti-mandoza mahatsiravina io mandra-pamongonantsika azy isaky ny vazan'izao tontolo izao. Na dia efa nisy aza ny ezaka lehibe natao tamin'ny fanomezana natao ho an'ny tahirim-bolanay manerana an'izao tontolo izao, dia mbola misy ny asa tokony hatao. ”